Hose hydraulika fingotra, Fiting hydraulic, hose fingotra - Sinopulse
Jereo hoe inona koa no ataontsika
SINOPULSE HOSE FACTORY CO.,LTDdia ny mpanamboatra matihanina ny Hydraulic fingotra hose, Industrial fingotra hose, PVC hose sy ny fitaovana mifandraika avy any Shina.Mifantoka amin'ny kalitao sy serivisy izahay, mampiasa ny fitaovana alemana mandroso indrindra, mamokatra ny hose sy ny fitting araka ny fenitra SAE sy ny fenitra DIN EN.
Manana traikefa momba ny famokarana 15 taona mahery izahay, nangataka fitsapana ny fitaovana alohan'ny famokarana, manara-maso ny fizotran'ny famokarana manontolo ary ny fitsapana tsindry 100% alohan'ny hanangonana.
Ny marika manokana "SINOPULSE" dia ampiasaina betsaka amin'ny tsena anatiny ho an'ny milina fananganana, milina fambolena ary fitaovana indostrialy hafa, mandritra izany fotoana izany dia aondrana any Amerika, Italia, Alemana, Polonina, Rosia, Afovoany Atsinanana, Amerika Atsimo, Azia ary Afrika.
Izahay dia mandray ny mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ho any amin'ny orinasa manao fiaraha-miasa mahavokatra aminao.Raha mila hose sy fitaovana ianao, mifandraisa aminay tsy misy fisalasalana. Hanome tolotra matihanina, entana sy vidiny ianao!